28 / 06 / 2021 28 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 415 Views စာ0မှတ်ချက် 75302 မှာ Imperial လွန်း, 75315 Imperial အလင်း Cruiser, Baby yoda, dune မျက်နှာ, အမှောင် Trooper, အမှောင် Troopers, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, Disney, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Fennec Shand, Jens Kronvold ဖရက်ဒရစ်, Lego, Lego Con, Lego ဒီဇိုင်နာများ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego Star Wars, Lucasfilm, လုကာ Skywalker, Michael Lee Stockwell, Moff ဂိဒေါင်, အဆိုပါ Jedi ၏ပြန်သွား, Star Wars, Star Wars: အ Jedi ၏ပြန်လာ, Star Warsဖြေ, ကေလး, အဆိုပါ Mandalorian
အဆိုပါ Lego Star Wars ဒီနွေရာသီရဲ့ထင်ရှားတဲ့ Mandalorian ဇာတ်ကားမှလုကာ Skywalker ကိုဘာကြောင့်ချန်လှပ်ထားသလဲဆိုတာကိုဒီဇိုင်နာများထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ 75315 Imperial အလင်း Cruiser.
တရားဝင်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် Lego တနင်္ဂနွေနေ့တွင် CON 75315 Imperial အလင်း Cruiser နိဂုံးအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်သည်မှာ Mandalorian ၏ဒုတိယရာသီ၊ အခန်း ၁၆ - ကယ်တင်ခြင်း။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်အများစုကိုရိုက်ကူးပြီး Mando, Baby Yoda, Cara Dune, Fennec Shand, Moff Gideon နဲ့ Dark Trooper တို့ကိုသရုပ်ဆောင်ပါတယ်။
သငျသညျထိုဇာတ်လမ်းတွဲမြင်ကြလျှင်သင်သိပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သျော, အဓိကတစ်ခုရှိပါတယ် Star Wars ဇာတ်ကောင်နေရာမှပျောက်ဆုံးနေသောဇာတ်ကောင် - နောက်ဆုံးပေါ်အခိုက်အတန့်တွင်လှည့်လည်သွားလာနေသောလုကာ Skywalker သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းများကိုမဆုတ်မနစ်ရပ်။ မရပ်တန့်နိုင်သည့်ထင်ရသောအမှောင်တပ်သားများမှကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
စကားပြော Brick Fanatics ဒီနှစ်မှာ Lego ပရိတ်သတ်မီဒီယာဖြစ်ရပ်သည် Lego Star Wars ဒီဇိုင်နာများကဖော်ပြသည်မှာလုကာသည်အဘယ်ကြောင့်မ ၀ င်ရသလဲဆိုသည့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ သူသည်သူပြသမည့်ပွဲ၌ပင်လာမည်ကိုသူတို့မသိခဲ့ပါ။
Creative Lead Jens Kronvold Frederiksen က“ ဒါကသူတို့လျှို့ဝှက်ထားတာပဲ” ဟုပြောခဲ့သည်။ ဒါကကစားစရာထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်မှဒီပြသနာကိုပြသခြင်းမပြုမီက The Child ထုတ်ကုန်ကိုမဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ [Disney Lucasfilm] သည်ဘာမျှမမျှဝေပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလွန်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုကြောင့်၎င်းသည်ဖျက်ဆီးသူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကပဲဘယ်လိုပဲ။
ဒီဇိုင်းမန်နေဂျာ Michael Lee Stockwell ကလည်းပြပွဲ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်ဌန်တာကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုလည်းရှင်းပြခဲ့သည်။ Lego Star Wars အစုံ။
“ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာကားအကြောင်းရည်ညွှန်းကိုးကားခံရမှာဖြစ်ပေမယ့်ဘယ်ယာဉ်နဲ့ဆက်စပ်နေမလဲဆိုတာကိုတကယ်တမ်းသိသည်အထိ၊ အဲဒီမော်တော်ယာဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲပါတယ်” ဟုမိုက်ကယ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒါကြောင့်အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအပိုင်းအစတွေအားလုံးပြိုလဲသွားပြီ၊ ဒီဇိုင်းတစ်ခုနဲ့တခုခုမတူနိုင်ဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်။
“ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာသူတို့လိုချင်တာအားလုံးကိုဖြန့်ဝေပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် faucet ကဲ့သို့အပတ်တိုင်းအနည်းငယ်ထဲ့နေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းချင်းလုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး၎င်းကိုအတူတကွထားနိုင်သည်။ ပြီးတော့ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ အချို့လူများကကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ပြုလုပ်သည်ဟုထင်သလောက်မသိကြပါ။ အပိုင်းအစတွေအားလုံးနေရာမကျခင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မယ်။ ”
သင်၏ကိုယ်ပိုင် Skywalker minifigure ကိုသင်ထည့်ရန်လိုအပ်သည် 75315 Imperial အလင်း Cruiser သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာ p လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးartနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုအပေါ် icularly တိုတောင်း။ ကံကောင်းပါစေ၊ တကယ်လို့သင်ဟာ Jedi မူရင်းကိုပြန်ယူထားတာအမှန်ပဲ 75302 မှာ Imperial လွန်း.
← ယခုသင်သည်သင်၏ VIP အချက်များကိုအငြိမ်းစား LEGO အစုံမှလှုံ့ဆော်သောဆုတစ်ခုပေါ်တွင်သင်သုံးစွဲနိုင်သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်ပြက္ခဒိန်အရောင်းပြခန်းနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်အသစ် LEGO အသစ်များ →